🥇 ▷ Bogga loogu talo galay 'covid-19' wuxuu bilaabayaa olole dadka lagu aruurinayo si uu usii wado ✅
Bogga loogu talo galay ‘covid-19’ wuxuu bilaabayaa olole dadka lagu aruurinayo si uu usii wado
Tan iyo bilowgii covid-19, xubno badan oo ka mid ah bulshada cilmiga iyo caafimaadka ayaa si adag u shaqeynayey isla mar ahaantaana tijaabinaya, falanqeynaya oo la wadaagaya macluumaadka khubaro kale dadaal si loo fahmo loona gaabiyo horumarka cudurkaan ee saameeya malaayiin dad ah oo adduunka ah.
Dareenkan, dabayaaqadii bishii Maaris, Isbahaysi ka mid ah Hindisaha Hindisaha Teknolojiyada ee Ingiriiska ayaa loo qabtay si uu iskugu dubbarido koox dad ah oo ka tirsan warshadaha teknolojiyada oo oggolaaday ficillada uu Ingiriiska ka qaatay la tacaalida coronaviruses.
Bogagga internetka sida Code4Covid.org waxay u muuqdaan sababtoo ah talooyinka kale ee khadka tooska ah sida Covidmutualaid.org iyo Covid Tech Support.
Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa mashruuc CoronavirusTechHandbook (CTH) oo uu abuuray iskuulka tikniyoolajiyadda siyaasadeed ee Newspeak House kaas oo horseedi doona dhaqdhaqaaqa isla markaana si dhakhso leh u noqon doona bartilmaameed dhammaan arrimaha la xiriira covid-19. Wixii intaa ka dambeeyay, CTH waxaa loo tixgeliyey inay tahay maktabada ugu weyn ee furan ee qalabka coronavirus iyo xogta la heli karo maanta.
Sababtaas awgeed, boggu wuxuu go’aansaday inuu bilaabo olole aruurin lacag aruurin ah halkaas oo ay rajeynayaan inay kor u qaadaan 27,000 rodol oo jilicsan si ay u sii wadaan dhiirrigelinta isgaarsiinta ka dhexeysa khubarada sidaas darteedna waxay gacan ka geystaan ​​badbaadinta nolosha inta ugu badan ee suurtagalka ah ee cudurka.
Iyada oo la adeegsanayo qalabkan (CTH), dhakhaatiirta, cilmiga farsamada iyo khubaro ayaa ka tashan kara mashruucyada, ka heli kara jawaab celin ku saabsan dhaqamada ay dadka kale ku qabtaan deegaanka isla markaana xiriir la yeeshaan. Tani waxay u oggolaaneysaa qof walba inuu falanqeeyo xaaladda covid-19 aragti ka duwan, sidoo kale fiiri sida khubarada kale ay u wajahaan ka hor inta aysan ficil diiradda saarin weerarka weerarka.
Waxa ku yaal inka badan 500 bog bogagga CTH, halkaas oo khubaradu marin u heli doonaan macluumaad fara badan, oo ay ku jiraan aaladda maalgelinta bulshada, iyo sidoo kale naqshadaha taageerayaasha.
Ilaa hadda CTH waxay uruurisay in kabadan 500,000 oo aragti gudaha Boqortooyada Midowday iyo dibadaba. Erayadii Nathan Young, oo madax ka ah hindisaha iyo xubin ka tirsan Newspeak House oo tixraacaya dadaallada caalamiga ah ee lagula dagaallamayo coronavirus, wuxuu yidhi:
La-dagaallanka coronavirus-ka waa mushkilad xagga sayniska iyo siyaasadda ah, laakiin sidoo kale waa arrin isuduwid ah (…) Khubaro ka socota adduunka oo dhan si adag ayey u shaqeeyaan, laakiin ma garanayaan waxay kuwa kale sameynayaan (…) Dhakhaatiirta ilaa taageerayaasha wax soosaarka ilaa xildhibaannada, qof walbaa wuxuu ubaahanyahay inuu wadaago aqoonta isla markaana u helo xalal dhaqso ah.
Waxaan rajeyneynaa inay guuleystaan.